ဓါးစာခံ ဖြစ် သွားရတဲ့ လက် ပတော့ လေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ဓါးစာခံ ဖြစ် သွားရတဲ့ လက် ပတော့ လေး
ဓါးစာခံ ဖြစ် သွားရတဲ့ လက် ပတော့ လေး
Posted by မိုချို on Jun 22, 2012 in Computers & Technology, Creative Writing | 41 comments
အိုင် တီ ဆရာများ အကြံ ပေးကြ ပါ ကုန်
သူ့ ကို သူမ အတော် တင်းနေ သည်။ ဒါ့ ကြောင့် ညနေ စာ ပြင်ဆင်ပေးပြီး တာ နှင့်  ကွန်ပျူ တာရှေ့ သွားထိုင် ၊အကျင့် ပါနေတဲ့ လက်က ၀င်နေကြ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ကိုဖွင့် ၊ စာထိုင် ဖတ် နေလိုက်၏။ ခဏနေတော့ သူလည်းဝင်လာ၊ သူ့ စက် သူဖွင့် ၊ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တာ နည်းနည်းပါးပါးကြည့် ပြီး အပြစ်လုပ်ထားသူ (သူမသတ်မှတ် ချက် အရ) ပီပီ သူမ ကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်နဲ့ စကား စပြောဖို့ ကြံနေတာ သိတဲ့ သူမက လက်က မောက်စ် ကိုင်၊ မျက် စေ့ က စာဖတ်၊ အားနေတဲ့ ပါးစပ် နဲ့ သူ့ ထက် အရင် ဦးအောင်ပေါက်ပေါက် ဖောက် …/%&%*#!%^&*%^%^”
သူ (လေသံပျော့ လေးဖြင့်) ။ ။ ကိုယ့် ကို ရုပ်ရှင်လေးဘာလေး မဖမ်း ပေးတော့ ဘူးလား။
သူမ ။ ။ရှင်ကြည့် ချင် တာ ရှင့် ဘာရှင် ဖမ်း ပေါ့…!@##$%^^*^$$**%#
သူ ။ ။ ဒီနေ့ ဘာသတင်းတွေ ထူးလဲ ပြောပြပါအုံး။
သူမ ။ ။ ရှင့် စက် ဖွင့် ထားတာပဲ ၊ ကိုယ့် ဘာ ကို ဖတ်ပေါ့….%#$^&&**(*%
သူ ။ ။လာပါ ၊ ကိုယ် က စာဖတ်ရမှာပျင်း တယ်၊ မင်းပြောတာပဲ နားထောင် ချင်
တာ။ နောက်ပြီး မင်း ဖွင့် ပေးတဲ့ ရုပ်ရှင် တွေ က ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်
ဘာသာ ကို ဆို ဘယ်ကားကောင်းမှန်း မသိဘူး။ မင်း စာဖတ် တာက
ကိုယ် အလုပ် သွားတဲ့ အချိန် တနေကုန် ဖတ်လို့ ရတာပဲ။
သူမ ။ ။ အိုး …ကိုယ့် မျက်စိနဲ့ ကိုယ် ပဲ ရှင်လဲ ကြိုက်တာကြည့် ၊ ကျုပ်လည်း
သူ (လေသံမာလာလျက်) ။ ။ မင်းတို့ သားအမိ ကို အကုန်အကျ ခံပြီး ဒီမှာ ခေါ် ထားတာ မင်း ကို
အင်တာနက်ရှေ့ ထိုင်ခိုင်း ဖို့ မဟုတ်ဘူးကွ။
သူမ ။ ။ဘယ်သူကကော အတင်း နေမယ် ပြောနေလို့ လဲ၊ ရှင့် ဘာ သာ ရှင်
မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ခေါ်ထားပြီးတော့…%#&^%><(*^#$@^%
သူ ။ ။ ဟာကွာ…..မင်း……..ခွမ်း……
ခွမ်း… လို့ ပဲ မြည် သလား……ခွပ်….. ခနဲ ပဲလား ….ဒုံး…. ကနဲပဲမြည်လိုက် သလား မသေချာ၊ သေချာ တာကတော့ ကျမ လက်ပတော့ လေးရဲ့ နိဂုံး မလှတဲ့ အသံ ပါပဲ။ ကုလား မနိုင် ရခိုင် မဲ ( ဤ စကားပုံ ကို ခုချိန် မသုံးသင့် မှန်းသိ ၊ အလားတူ စကားပုံ စဉ်းစားမရ၊ တချို့ က …..ကုလားမနိုင် ရခိုင် မေး ….ဟူသတတ် )
….. အဲ….. ရေးရင်း စဉ်း စားလို့ ရပြီ … ကြွက် မနိုင် ကျီ မီးနဲ့ ရှို့ ….သို့ သော် ပထမ စကားပုံ ကို သုံးတာ အကျင့် ပါ နေပြီ။
ဇာတ် ကြောင်း ပြန် လှန်ရရင် သူမက ကျမ…မိုချို .. ဆိုရင် သူက တော့ အိမ် က လူကြီး ပေါ့။
ကျမ ရဲ့ တနေ့ တာ က စပြောရ ရင် မိုးလင်းတာ နဲ့ အိမ် က လူကြီး အတွက် မနက်စာ ပြင် ပေး ၊ နေ့ လည် စာ ထုတ်ပေး ၊ သူ အလုပ်သွားတာနဲ့ သားတော် မောင် ကို မနက်စာကြွေး ၊ ဆေးကြော ၊ ရှင်းလင်း၊ လျှော် လှန်း ( လျှော်ရတာ မပင်ပန်း ပေမယ့် လှန်းရတာ ပင်ပန်း) ၊ပြီးတာနဲ့ ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင် ၊အင်တာနက် ဖွင့် ၊ ဆိုဒ် ပေါင်း စုံ ၀င် ဖတ်၊ အရင်ဆုံး ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဆိုဒ် က မန်း ဂေဇတ် ဆို တာတော့ ပြောဖို့ လိုမယ် မထင်။ သားတော် မောင် က လည်း ကျောင်း မနေ တော့ ကျောင်း လိုက် ပို့ ရခြင်း အိမ်စာ ကူ လုပ် ရခြင်း တို့ မရှိပဲ ထမင်း စားချိန် ထမင်း ကြွေး၊ အော် တစ်ဇင် ကလေးတွေ ထုံးစံ ပေါက်ကရ တွေ လျှောက် မလုပ် အောင် စောင့် ကြည့် ပေးရတာ က လွဲ လို့ အချိန် တွေ က အများကြီး ပို နေတော့ စာဖတ်လိုက်၊ စိတ်ပါရင် စာရေး လိုက်၊ ကွန့် မန့် တွေပေးလိုက် နဲ့ တနေကုန် ရောဆိုပါတော့။
စိတ်လို လက်ရ ရှိရင်တော့ auto cad သုံးပြီး ဒီ တသက် ဘယ် တော့ ပိုင်ဆိုင် ခွင့် ရမလဲ မသေချာ တဲ့ လှပေ့၊ ခမ်းနားပေ့ ဆိုတဲ့ အိမ် တွေ (အပျင်းပြေ) ထိုင် ဆွဲ။ ညနေ စောင်းရင် တော့ စက် ပိတ်ပြီး တာနဲ့ ညနေစာချက်ပြူတ် ၊ရေ မိုးချိုး ဖီးလိမ်း ပြီး သကာလ ၊ သားအမိ ၂ယောက် အောက်ဆင်း လမ်း လျောက် ၊ ယောက်ျား အပြန် ကို စောင့် ။
ညဘက် ရောက်သွားရင်တော့ ကျမ အင်တာ နက် သုံး လို့ မရတော့ ပါဘူး ၊ စက် တယောက် တ လုံး ပေမယ့် သူ့ ကို ဘေးနား ထားပြီး အင် တာ နက်ရှေ့ ငုတ်တုတ် ထိုင် နေတာ ကို မကြိုက်ပါဘူး။ သူကိုယ် တိုင် လည်း အလုပ် နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ၊ သိချင်တဲ့ အချက် အလက် တွေ ရှာတာကလွဲ ပြီး သတင်းအပါ အ၀င် ဘာမှ ဖတ် လေ့ မရှိ ဘူး( ဖတ်စရာ မှ မလိုတာ၊ ထပ်ဆင့် လွှင့် စက်ရုံ ရှိနေတာကိုး…) ..အဲ…ရုပ်ရှင် တော့ ကြည့် တယ်၊ မြန်မာကား၊ ဟောလိဝုဒ်ကား၊ ဘော လိဝုဒ် ကား၊ တရုတ်ကား ….ကျမ စိတ်ကူးတည့် ရာ တကားကား အင်တာနက် ထဲက နေ ဖွင့်  ပေးပြီးရင် ကျမ ပါ အတူတူ ကြည့် ပေါ့ လေ။
ကျမ ဖျော် ပေးတဲ့ လလက် ရည် (ရယ်ဒီမိတ်) လေးသောက်၊ ပြင်ဆင် ပေးတဲ့ အသီးနှံ၊ မုန့် လေး စား၊ ကျမ ပြော ပြတဲ့ ( တနေ့ တာ ဖတ်ထားတဲ့ )သတင်းတွေ၊ အတင်းတွေ၊ ဟာသတွေ နားထောင်ပြီး ရုပ်ရှင် လေး ကြည့်လိုက်၊ ကလေး လေး လို ဖြစ်နေတဲ့ သားတော် မောင် ကို စ လိုက် နဲ့ အဲဒီ အချိန် တွေ ဟာ သူ့ သူငယ် ချင်းတွေ ( မိသားစုနဲ့ ဝေးနေတဲ့ သူတွေ) အား ကျကြ တဲ့ သူ့ ရဲ့ စည်းစိမ် ခံ နည်း ပဲ ပေါ့ ။
သူအပြစ် တခုခု လုပ်မိရင် တော့ ( ဥပမာ….ဘီယာသောက်တာ၊ တပတ်စာ ပေးထားတဲ့ အသုံးစရိတ် ကို ၃ ၊၄ ရက် နဲ့ ကုန်သွားတာ ) အဲဒီနေ့ စည်းစိမ် ပျက်တဲ့ နေ့ပဲ။ ခုလည်း စည်းစိမ် ပျက်တဲ့အပြင် အဆက်မပြတ် ပွမ် နေတဲ့ ကျမ ကို ဘာမှ လုပ် လို့ မရတော့ ကျမ စက် ကို ကိုင် ပေါက် ပစ်လိုက် တယ်။….. ပေါက် ပေါ့….. သူ့ ပိုက် ဆံနဲ့ ၀ယ် ထားတာပဲ ။ စက် က တော် တော် အကြမ်း ခံတယ် ပြောရမယ်။ မော် နီ တာ ကွဲ သွားရုံ ကလွဲ လို့ ကျန် တာ ဘာ မှ မဖြစ်ဘူး။
ဒီလို ဘ၀ ရာက် သွားတယ်
HDMI cable လေး သုံးပြီး ဒီလို ကြည့် တယ်။ ကေ၀ဋ် ပုဏ္ဏား အမာရွက် မြင်တိုင်း မဟော် သဓာ ကို သတိရ သလို စက်ဖွင့် တိုင်း သူ့ အပြစ် ကို သတိရအောင် တမင် မလဲပဲ ထားထားတယ်။
နောက်လထဲ ရန်ကုန် ပြန် ရင် ယူသွားပြီး အိမ် ကလူတွေ အတွက် ထားခဲ့ မှာ ဆိုတော့ တခါတည်းပဲ မော်နီတာ လဲ ပြီး ယူ လာ ရင် ကောင်း မလား၊ ရန်ကုန်ေ၇ာက် မှ လဲခိုင်း လိုက် ရင် ကောင်းမလား။ သုံးနှစ် ကျော် ပြီ ဆိုတော့ warranty ကုန်ပြီ ၊ ဒီမှာ လဲ ရင် စလုံး ၂၀၀ ကျော် ကျ မယ်၊ ရန်ကုန် မှာ ဆို ဘယ် လောက် ကျမလဲ ၊ ဘယ်ဆိုင်မှာ ကောင်းလဲ သိချင် ပါ တယ်။ အိုင် တီ ဆရာများ အကြံ ပေးကြ ပါ ကုန်။
Model Compaq Presario CQ 40 Notebook PC
ရွာ ထဲ ၀င် ရင်း တန်းလန်း ဖြစ်တာဆိုတော့ သဂျီးဆီ က အလျော် တောင်း ရင် ကောင်း မလား လို့ …ဟိ..ဟိ… ပြေး ပြီ… ဒက် ဂလောက် … ဒက် ဂလောက်
တော်သေးတာပေါ့ ၊ မိုချိုလေးသာ အုကြောင်ရဲ့ ကွန်မင့်တွေ ဖတ်နေတုန်း ဖြစ်တာဆိုရင် ၊ အခုအခြေအနေ လောက် ကို မကျန်လောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့ ။
သဂျီးရှိတဲ့ အမေရိကား ကို အမြန်ဆုံးသွားပြီး အလျော်တောင်းသင့်ပါကြောင်း ၊ အချွန်နဲ့ မခဲ့ပါအိ ။ ဟီဟိ
သို့ဝင်ရောက်ပြီးသကာလ သင်အလိုရှိ တောင်းတရာ အပေါင်းတို့အား
မေမြန်းနိုင်ပါကုန်သည် ဖြစ်သတည်း ..
GROUP အတွင်းရှိ အိုင်တီ ပညာရှင်အပေါင်းတို့က
မခြွင်းမချန် စိတ်ရင်းမှန် ဖြင့် ဖြေဆိုကြပေကုန်အံ့၊
lenovo i3 ဟိုတစ်လောက သွားဝယ်တာ ၄ သိန်း ၂ ထောင်ပေးရပါကြောင်း
laptop လေးသနားပါတယ်။ မမမိုချိုရယ်။ မြန်မြန် ဆေးကုပေးလိုက်ပါနော်။ ဒါနဲ့ မမကော ဘာတွေထိခိုက်သွားသေးလဲဟင်။
သူအပြစ် တခုခု လုပ်မိရင် တော့ ( ဥပမာ….ဘီယာသောက်တာ၊ တပတ်စာ ပေးထားတဲ့ အသုံးစရိတ် ကို ၃ ၊၄ ရက် နဲ့ ကုန်သွားတာ )
ဒါဟာ အပြစ်တဲ့လား ..အဲ့ဒါ အပြစ်တဲ့လား… ဒါလား အပြစ်တဲ့လားကွယ်…အကျိပြောဦး ….
တွေ့လား သဂျီး …ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဂျီး ခန့်မိတဲ့ ဒုက္ခ
တကယ်တော့ …မှောင်မှောင်မဲမဲ မီးဖွင့် ၀င်တာ သည်သာ အကောင်းဇုံး….
လိမ္မာဇမ်းဘာဂီ့ ရယ် … လိမ္မာဇမ်းပါဂီ့ ရဲ့….
မိုချိုရေ ဂီ့ကတော့ တရားခံရှာနေပြီဟေ့။ အကျိရေဖြေလိုက်ပါအုံးဟ။ စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ကန် သင်းလို့။
မမိုချို ရော အဲလိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန် စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားသွားရလဲ ..
ဂျူးမ သာဆိုရင်တော့ .. ဘာရမလဲ သူ တခွမ်း.. ကိုယ် တခွမ်းပဲ …
အဲဒါမှ စိတ်ပြေမှာ …ဟိဟိ (မြှောက်ပေးတာဟုတ်ဘူးနော်) .
ရှာကြည့်လိုက်တော့ Compaq Presario CQ40 (Core2Duo P7350 processor 2.0GHz; 2GB RAM) လို့တွေ့တယ်။ လဲသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ၁၀၀၀၀၀ လောက်တောက်ကျလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ screen က 14.1 လားမသိဘူး။ ကျွန်တော်တစ်ခါလဲဘူးတယ်။ ချမ်းမမြေ့မှာပါ။ ဈေးလဲမှန်ပါတယ်။ သေသေချာချာ ပြောပေးလေ screen size ကို ဈေးမေးပေးမယ်။
မမမိုချိုကလဲ … ကျန်တာကောင်းတယ်ဆိုတော့ monitor လေးတစ်ခုဝယ်လိုက်ပေါ့ …. အပြင်သယ်မသွားဘူးဆိုရင်ပေါ့ .. Monitor လဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 37 လမ်းက Top Ster မှာ အဆင်ပြေပါကြောင်း …. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ Compaq က spare parts ရှားတယ် …
screen ကွဲသွား ပြီ ဆို တော့ ပြင် ရင် တ၀က်ဈေး မက တော့ဘူး။
ပြင် ရင် ကုန် မဲ့ ပိုက်ပိုက် ကို နဲနဲလေး ပဲ ထပ် စိုက် ရင်တောင် သူထက် ကောင်တာ ရနိုင် မယ်။
အသစ် ၀ယ်တာ က mobile အဖြစ် သုံး။
ခု ဟာ ကို တော့ desktop လို သုံး၊ screen တောင် ကျယ်ကျယ် ကြည့်ရ သေး တယ်။
ဘာမှ မဟုတ် ဖူး သူ က ရုပ်ရှင် ကို စရင် ကြီးကြီး နဲ့ ကြည့် ချင် လို့ ဖြစ် မယ်။
ကော်နဲ့ပြန်ကပ်မလား .. တိပ်လေးနဲ့အုပ်ပြီး ယာယီသုံးမလား
ဘာများလည်းမှတ်ဒယ် လင်မယားရန်ဖြစ်နေဂျဒါဂိုး ဘဲရီးဂွတ်ဘဲရီးဂွတ်
အိုက်လူဂျီးဂို ညစာနှစ်ရက်လောက်မကျွေးနဲ့ ကြုံရာစာ စားဘဇေ ဒါမှဒင်းသိမှာ
ဒါပေမယ့် လင်မယားရန်ဖြစ်ဒယ်…………..ဆိုဒါ လုပ်သားပြည်သူ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဒေဘာ
ဘဲဂျီးဂို နည်းနည်းပြန်ညုလိုက် အသစ်ပြန်ရမှာဗျားးး:D
ကျုပ်သာ အဲဒီဂျီးဒေါ်နေရာမှာဆို..သူ့ လက်ပ်တော့မှာ ဖနှောင့်နဲ့ပြန်ပေါက်ပစ်မှာ
ခုတော့ သူ့ ပါ ရွာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေး ထားတော့ ရွာသူား တော် တော် များများကို သိနေပြီ… နိုး .. ပလော် ..ဘလောင် ဖြစ်သွာပြီ
မော်နီတာလေးပဲ ကြွသွားပြီး ကျန် တာ ကောင်း နေတော့ နှမြောသား ၊ ရန်ကုန် အိမ် မှာ ထားခဲ့ မှာ ဆိုတော့ အသစ် တော့ ၀ယ်ပေးတော့ဘူး
အိမ် ပြန် ရောက်လို့ အဆင်သင့် လက်ဆေး စားရုံ (ထမင်း ပြောတာနော်) ဘ၀ ကို လိုချင် ရင်တော့ကိုယ့် ဘက် ကလည်း နည်းနည်း ရင်းနှီးရမှာပေါ့ ။
ညိမ်းညိမ်းနဲ့ ဂျူးဂျူးမ ရေ
အမတို့ ကတော့ ရန်ဖြစ်လိုက် ၊ပြန်ချစ်လိုက်ပဲ။ ရန်ဖြစ်တိုင်း လည်း သူ့ ကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကိုယ့် ကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် တခုခု တော့ ..ဂွမ်း … ပြီး သားပဲ။ မကောင်းတဲ့ အကျင့် မှန်းသိပေမယ့်၂ ယောက် လုံး က စိတ် ကြီးတော့ လူကို မထိခိုက် စေ ပဲ ဒေါသ ကို အဲလိုနည်းနဲ့ ပြ ကြတယ် ပေါ့။
ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်လည်း တူတယ်…(တားတားက လူပျိုနော် အာဟိ)
ကိုယ့်ကြောင့် တစ်ခုခုဖြစ် ဂွမ်းပြီးသားပဲလည်း တူတယ်..ဟဲဟဲ..
အသတ်မနိုင် ရခိုင်မေး ဆိုသလိုလည်း မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနဲ့
ဆက်စပ်လို့ မှတ်သားဖူးပါကြောင်း မမိုချိုရေ့…
လျှာဝင်ရှည်လိုက်အုံးမယ်… ” သူအပြစ် တခုခု လုပ်မိရင် တော့ ( ဥပမာ….ဘီယာသောက်တာ၊ တပတ်စာ ပေးထားတဲ့ အသုံးစရိတ် ကို ၃ ၊၄ ရက် နဲ့ ကုန်သွားတာ ) ” ဒါကို အပြစ်လို့ ယူဆထားသလားဗျာ.. ယောက်ျားဆိုတာ အပေါင်းအသင်းနဲ့ဆိုတော့ တစ်ခါတရံ ဘီယာသောက်တာ အပြစ်လို့မယူဆသင့်ပါဘူး… အမြဲတမ်း သူငယ်ချင်းတွေကပဲ ရှင်းပေးနေတာလဲ မဖြစ်သင့်ဘူုး.. အဲဒီတော့ တစ်ပတ်စာဟာ တစ်ရက်ထဲနဲ့လည်း ကုန်ချင်ကုန်သွားမှာပဲ..။
” ပေါက် ပေါ့….. သူ့ ပိုက် ဆံနဲ့ ၀ယ် ထားတာပဲ” အဲဒီလို သဘောထားနိုင်ရင် ” သောက်ပေါ့…သူ့ပိုက်ဆံနဲ့ သူသောက်တာပဲ” ဆိုတဲ့ သဘောလည်း ထားနိုင်သင့်တာပေါ့…။
Computer screen အတွက်တော့ Sim Lim Squre မှာသွားဝယ်ပါ s$ 120 ထက်မပိုပါဘူး…သူတို့လှဲပေးပါ လိမ့်မယ်..။ အနည်းဆုံး ၃, ၄ ဆိုင်မေးပြီးမှ ၀ယ်ပါ..။ ဈေးဆစ်နိုင်ရင် s$100 လောက်နဲ့လည်း ရပါတယ်..။
ကို စီတီ ဇင် ရေ
အဲ ဒီ အတိုင်း ဟုတ်ပါတယ် ၊ မော် နီ တာပဲ လဲချင်တာပါ၊ ၁ သိန်း လောက် ဆိုတော့ ဒီမှာ ၂၀၀ ဆို သိပ် မကွာ တော့ ဘူးပဲ၊ ပြောပြ ပေးလို့ ကျေူဇူးပါ။
ကိုဟိန်းဝင်း ပြော သလို ဆို spare parts လည်း ရှားတယ်ဆိုတော့ ဒီမှာ ပဲ လဲ ပြီး ယူသွားပေးရတော့ မယ် ထင် ပါရဲ့။
ကို လေးပိုင် ရေ
ခုလည်းတီ ဗွီ နဲ့ တွဲပြီး အဲလိုပဲ သုံးနေ တာ၊ ရန်ကုန် မှာ ပေးခဲ့ ရင် အကောင်းတိုင်းလေး ဖြစ် နေ အောင် လဲချင်တာ
ယောက်ျားတွေ များ ညစာ ကို အပြင် မှာ စားခိုင်း လို့ ကတော့ အကြိုက် ပေါ့ …ဟုတ် တယ် ဟုတ်
LED -> 65000
LCD -> 85000 တဲ့ဗျ။ mocho ကဘာအမျိုးအစားလဲ။ hp core i3 ကြီးကွဲသွားတုန်းကလဲထားတာတော့ ခုထိကောင်းနေတုန်းပဲ ၂ နီးပါးလောက်တော့ရှိနေပြီ။ ဒီဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့ လဲသင့်ပါတယ်။
လက်တော့ မော်နီတာကျဉ်းနေတော့ မိန်းမကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ကြည့်ရအောင် စေဒနာနဲ့ခွဲပီး အတစ်ဝယ်ပေးချင်ရို့ကိုင်ပေါက်လိုက်ဒါ..
၀ဘ်ဆိုက်တွေ ကြည့်ရတာ ဘယ်လောက် အဆင့်မြင့်လဲ
ကျေးဇူးပ ၊ Sim Lim Squre ပဲ သွားလိုက် တော့ မယ် ၊ ၁၀၀~၁၂၀ က လက် ခပါ အပြီးလား။အမက အမတို့ အိမ်နား boonlay က ဆိုင် တွေ မှာ မေးတာ၊ အမ ကွယ်ရာမှာ သူဘီယာ သောက် တာ ဟာ အပြစ် ရှိ တယ် လို့ သတ်မှတ်တယ်။ တခါတလေ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ထိုင်ရင် အမတို့ ပါ အမြည်း လိုက်စားပေး တာ။
အမတ်မင်းရေ မြှောက်ပေးတယ် ပေါ့
မြန် မာ စာ အစ က ရခိုင် က လာတယ် လို့ ရခိုင် တွေ ပြော ဘူးသလားပဲ။
ပြောရရင် သမိုင်းမှာ အ တယ်ဗျ…
ရခိုင်တွေက အသတ်နိုင်တယ်လို့တော့ ကြားဖူးသားဗျ…
ယောက်ကျားလေးတွေရဲ့သဘာဝကိုက ဘီယာဆိုင်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ထိုင်ရင် ကိုယ့်မိန်းမ၊ ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူကို ဘေးမှာထားပြီး မထိုင်ချင်ပါဘူး။ မတတ်နိုင်မှသာ ထားရတာပါ။
မမိုချိုက ဒီလောက်တော့ လွှတ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အလွန်အကျွန်ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ပေ့ါ။
ဘီယာသောက်တိုင်းသာ အပြစ်ဆိုရင်တော့ မိန်မယူဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ လူပျိုလေးတွေ လူပြိုကြီးဘဲလုပ်တော့မယ်ဖြစ်သွားအုန်းမယ်
သူ့ ဟာက ရုံးက ပေးထားတာ၊ ပြန် လုပ်လို့ ရဘူး၊
ဟိုတလောက အသည်းတုန်၊ အူတုန်စရာ တွေ ကို ပြူးတူးပြဲတဲ ကြီး နဲ့ ကြည့် ပြီး ၃ ရက် လောက် ထမင်း စားမ၀င် ဖြစ် သွားခဲ့ ရသေးတယ်။
အစ်မရေ…အစ်မရဲ့ချစ်ချစ်ကလည်းစိတ်မြန်လိုက်တာနော်… အစ်မအဲဒီမှာအပြီးအစီးလဲရင် ၂၀၀ဆိုတော့ လည်းမဆိုးဘူးထင်ပါတယ်..ဒီမှာလည်း၁သိန်းကျော်လောက်ကျမှာပဲဆိုတော့လေ..ညီမလည်း လဲဖူးတယ်.. လမ်းမတော် ၁လမ်းက Yamate ဂျပန်လို ယာမာတဲလို့ထွက်တယ်တဲ့..အဲဒီမှာက လက်ပ်တော့ပ်သီးသန့် ပြင်တာပါ.. လမ်းမတော် ၁လမ်းက လမ်းတိုလေးပါပဲ..
ရွာသူားတွေကလန်တယ်။ အားကျလို့ ရောပြီး သူများတွေလိုပဲမြှောက်ပေးလိုက်ဦးမယ်။ သူ့laptop ကိုဆော်လို့ မရရင် ရတဲ့နေရာကို တီးလိုက်။
စိတ်မဆိုးနဲ့ နော် မမိုချို။ လူတွေခင်ခင်မင်မင်ပြောနေတာအားကျလို့ နောက်တာပါ။
အန်းနီးဝေး, သိပ်မကြပ်ပါနဲ့ အမရယ်။ ကိုယ်ရှာတဲ့ပိုက်ဆံမိန်းမဆီကပြန်ပြီး budget နဲ့ သုံးနေရတဲ့လုတွေသနားပါတယ်။
စောစောစီးစီး အင်မတန် သဘောကျသွားမိ တဲ့ အပြင် မိုချို ရဲ့ ဇွဲ ဝိရိယ ကောင်းကောင်း နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ Post လေးဖြစ်တာမို့ အားရပါးရ ရီ ရင်း အားပေးသွားပါတယ်။
မိုချို့ လူကြီး နေရာ က ကြည့်ရင် မမှား ပါဘူးဟယ်။
သူသည်းမခံ နိုင်တာ နဲတောင်နဲ သေးတော့။
လက်ပတော့ လေး အတွက် အကြံ ပြုချင်တာ ကတော့ အပေါ် မှာ မန့်ထား တဲ့ လေပြေ လိုဘဲ။
မော်နီတာ တစ်ခု နဲ့သာ တွဲ သုံးတာ အကောင်းဆုံးဘဲ။
laptop screen ကို လဲ ရင် သာမာန် ပြင်လိုက်ရုံ ကတော့ ရေရှည် ခံ ဖို့ မသေချာဘူး။
နောက် တစ်ခု ထပ်ချွန် ပေးရရင် Ebay က နေ မိုချို့ အမျိုးအစား နဲ့ တူတာ ရနိုင်တယ်။
တစ်ချို့ က screen အကောင်း၊ ယူနစ် ကပျက် နေတာ။
ပြီးတော့ ကိုင်ပေါက် လိုက်တဲ့ သူ ကို ကလိ ခိုင်းလိုက်။
လုံးဝ ပျက်သွားရင် သူ့အပြစ်။ အသစ်သာ ဝယ်ခိုင်းပေတော့။
နောက် အကောင်းဆုံးနည်း တစ်ခု ကို မြင်မိသေး။
တုံတုံလေး နဲ့ ဒေါက်တာကြီး ၊ နွယ်လေး နဲ့ ဂဂ တို့ လို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စိတ်ပါလက်ပါ ရွာထဲ မှာ သောင်းကျန်း ကြတာ ဟန်ကျလို့။
ဒီတော့ မိုချို ရေ
မိုချို့ လူကြီး ကို လဲ ရွာမှာ တစ်ခု ဖွင့်ပေးပြီး ရွာသားသာ လုပ်ခိုင်းလိုက် ပေတော့။
ဒါကြောင့် ပြောတာ နော်။ အနာဂါတ် အိမ်ထောင်ရှင် ဖြစ်ကြမည့် သူများ။
နဂိုထဲ က အတိအလင်း ကြေညာ ထားကြ။
အိမ်ထောင်ကျပြီးလဲ ကိုယ် ဘယ်လို ပုံစံ နဲ့ ဆက်နေ မှာ ဆိုတာ။
သဘောတူ ရင် ပြီးမှ လာပြီး ဂျီ မကျ နဲ့ လို့။ ;-)
ဟုတ်တယ် အရီး လတ် ရေ
သူ အကြောက် ဆုံး က ကျမ ပေါက်ပေါက် ဖေါက်တာပဲ။ နည်း နည်း ဆိုရင် တော့ နားထောင်တယ်။ များသွား ရင်တော့ ပွဲ ကြမ်း သွားကြရော။
ခုတော့ နီးစပ် လာပြီ ၊ သူလည်း ကျမ စာတွေ ဖတ်ရာ ကနေ ရွာ ထဲက ပိုစ့် တွေ စိတ်ဝင် စားတတ် နေပြီ။
မော် နီတာ က တေ့ အပေါ် က ကိုလူဟားပြော သလို Sim Lim Squre မှာ သူ့ ပဲ သွားလဲခိုင်းရမယ်။
ကြိုးစား ပမ်းစား တလုံးချင်း ရိုက် ထားတဲ့ စာတွေ ၀င်ဖတ်ပြီး မန့် ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
အကြံ ပြုတာ ကျေးဇူးပါ
ဘက်ဂျက် ခွဲ တမ်း ချ ရတဲ့ အလုပ် ကလဲ အပြော လွယ် သလောက် ပညာ သား ပါရတယ် နော့။
အောင်မယ်လေး မိုချိုရယ် စနေတာမှတ်တာ တကယ်ကြီးပဲ။ တော်သေးတာပေါ့ လူတွေဘာမှမဖြစ် လို့။ နှမျောတာလက်ပကျွတ်ကလေး။
နောက်တစ်ခုက မိုချိုက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လို့ လင့်(၂)ခုပေးလိုက်မယ်နော်…
အရင်ဆုံး အဲဒီကိုသွားပြီးတော့ $68 နဲ့ အသစ်ဝယ်လိုက်ပါ… ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့LCD မော်ဒယ်ကို သေချာဖတ်ဦးနော်… အမျိုးအစားနဲနဲကွဲမယ်ထင်လို့…
နောက်ပြီးတော့ အောက်ကလင့်မှာသွားပြီး အဲဒီစက်ကို တစစီဘယ်လိုဖြုတ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါ…
(၃) အဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်… ဟီး…
ကွန်ပျူတာနဲ့မစိမ်းသူမို့ အားပေးခြင်းနော်… တကယ်မခက်ပါဘူး… စမ်းကြည့်ပါနော်…
service ကိုသွားပြီး monitor screen ပြန်လဲခိုင်းရင်ရပါတယ်အမရဲ့
external monitor နဲ့သုံးရတာ အဆင်ပြေပေမဲ့ မကောင်းဘူးဗျ…
ဘဲကြီးက ဘေးနာမှာ ပါနေသလိုပေါ့ဗျာ…
laptop monitor screen ပဲပြန်လဲဖို့ အကြံပေးပါတယ်..
အူးလေး အန်ကယ် ကိုကြောင်ဝတုတ် ပြောတာကို လက်ခံပါတယ်။
Sim Lim Square မှာက တရုတ်ဆိုင်တွေ များတယ်ဗျ။ Hardware ပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်မှ ၀ယ်လို့ကောင်းတယ်။ ဈေးသက်သာတာလဲ မှန်တယ် ဈေးလဲစစ်လို့ရပေမဲ့ အခပ်မသင့်ရင် ဒုက္ခများတတ်ပါတယ်။LCD ဖြုတ်လဲတာ ဘာမှမခက်ပါဘူး သူက ကြိုးပြားပြား အကြည်လေး ၂ချောင်းလောက်ကိုဘဲ သူ့ socket ထဲပြန်ဖြုတ် ပြန်တပ်ပါ။
spare part ကလဲ warranty ရမရ စစ်ပီးဝယ်စေချင်ပါတယ်။ ဆုံးစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး…. တန်ဖိုးလဲ သက်သာ ကိုယ့်အတွက်လဲ အတွေ့အကြုံတိုးစေပါတယ်။ နောက်တချက်က အမက အိမ်မှာ အချိန်ရတဲ့သူဆိုတော့ အနည်းဆုံး ၁နာရီပါဘဲ…….ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
yeexie.ys@gmail ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ အမရေ…
ကျနော်ကတော့ စိတ်အရမ်းတိုလာရင် ကိုယ်ဖုန်းကို ကိုက်စားတာတို့ ရိုက်ခွဲတာတို့ မီးဖုတ်တာတို့ လုပ်တတ်ပါတယ်…အဲဒါလေးက နည်းနည်း အကုန်အကျ သက်သာလို့ အမချစ်ချစ်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေး စေချင်ပါတယ်….
အောင် မငီး ကို ဖက်ကက် ရယ် ၊ မြှောက် ပေးတတ်ပလေတယ်။ ရန်ကုန် က မောင် တွေ ကို ဒါလေးနဲ့ ပဲ ချွေး သိပ် မလို့ ၊ အလုံးစုံ ပျက် စီး သွားလို့ မဖြစ်ဘူးရယ်
ကျမတို့ က ရန်ဖြစ် တိုင်း ဦးသူ က ကြုံရာ ဖျက် ပဲ၊ လက်ထပ် စာချုပ်တောင် အကောင်းတိုင်းမရှိဘူး ၊ တိတ်နဲ့ ပြန် ကပ် ထားရတယ်။
ကိုရင့် မောင့် ဗေဒင် မှန်ပါတယ်
အမမိုချို၏ လက်တော့ကလေး နှမျောစရာဗျာ။
နေရင်းကြားထဲက အရှောင် ကွဲသွားခဲ့ရပီ။
ကျမ စက် ကို ကိုင် ပေါက် ပစ်လိုက် တယ်။….. ပေါက် ပေါ့….. သူ့ ပိုက် ဆံနဲ့ ၀ယ် ထားတာပဲ
aက၀ဋ် ပုဏ္ဏား အမာရွက် မြင်တိုင်း မဟော် သဓာ ကို သတိရ သလို
ဆိုတာတွေကို ဖတ်ပြီး မိုချိုရဲ့ အမျှော်အမြင်ကြီးမှုကို မြင်လိုက်ရတယ်။
စိတ်လျှော့ စိတ်လျှော့ .. ဘယ်သူ အရင်လုပ်လုပ် နောက်ဆုံး နှစ်ယောက်လုံးရဲ ပိုက်ပိုက်ထွက်တာပါဘဲ..
မြန်မာပြည် က spare parts တွေက တရုတ်ပြည်လှမ်းမှာရတာပါ ။ အလွယ်တကူလဲမရဘူး ။ တစ်ခါတစ်လေကျ ရှာမရပြန်ဘူး ။ ဆိုတော့ အပေါ်က ဆြာများပြောသလိုပါဘဲ စကာင်္ပူမှာဘဲ ပြင်လာတာပိုကောင်းပါတယ်။
စကားအတင်းစပ် .ရခိုင်အလှုကို ဇူလိုင်လ ၈ ရက် တနင်္ဂနွေ လုပ်ဖို့ ချိန်ထားပါတယ် ။ မမိုးချို ရန်ကုန်မှာ ရှိနေဦးမှာလား ?
compaq CQ40 LCD ကပစ္စည်းပေါပါတယ်။
70000 လောက်နဲ့ လှဲလို့ရပါမယ်။
ကိုယ်ဘာသာဖြုတ်လို့လည်း လွယ်တဲ့ model ပါ။
ကျမတို့က ၇ ရက်နေ့ပုဂံ သွားဖို့ စီစဉ်ထားတော့ အလှုငွေ ပေးပွဲကို လာဖြစ်မယ် ထင်တော့ဘူး။ အကယ်၍ ရန်ကုန်မှာ ရှိနေရင်တော့ လာခဲ့ ပါ့မယ်။
အကြံပေး၊ ကွန်မန့် ပေးကြတဲ့ ရွာသူား အားလုံး ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီက Sim Lim Squre မှာ သွား မလဲ ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အိမ်ကလူက ဒီပိတ်ရက် ကို မအားဘူးဆိုတော့ နောက် အပတ် ပိတ်ရက် ဆို အရမ်း ကပ်သွားပြီ ။ ဒီအတိုင်းပဲ ယူသွားပြီး မောင်တွေ လက်ထဲ ပိုက်ဆံ ၁ သိန်းနဲ့တကွ အပ်လိုက်ပါမယ်။ အပေါ်က ဆရာ၊ ဆရာမများ ညွှန်တဲ့ ဆိုင်တွေ ဆီ သွားခိုင်းလိုက် ပါမယ်။ ပိုတာ ၊လိုတာ တော့ သူတို့ဘာသာ သူတို့သာရှင်းကြပေတော့။